Manana folo taona mahery Experience orinasa mpamokatra entana, Professional fanao blower maotera, blower rivotra paompy sy ny mpankafy radiatera
Supply Fahaizana: 20000-50000Piece / Pieces isam-bolana
Ara-nofo: Aluminum / Zinc
Ny vokatra hita eto ihany hanolotra ny sehatra ny asa aman-draharaha. Afaka mpanamboatra misy faritra
araka ny sary na ny santionany.
Fizarana ara-nofo: ADC12
Etỳ ambonin'ny: Sand fanapoahana
Nijoro lalana: CNC
OEM isika mpanamboatra izay manokana amin'ny famokarana aluminium tsindry ambony die nanarato teny amin'ny faritra, dia afaka manao ny rehetra
dingana avy amin'ny bobongolo famolavolana-bobongolo lasitra fanaovana fitiliana -die-fanariana-machining-surface fitsaboana-maso ao amin 'ny
orinasa, Product mikasika ny fanorenana milina, fitaovana fifandraisana, fiara hery rafitra, elektrika
forklifts, herinaratra fiara, orinasa sy ny hafa mifandraika automatique saha.
Fonosana sy ny Fitaterana;
Q: ny orinasa ve ianao na ny orinasa ara-barotra?
A: Isika dia matihanina mpanamboatra hitondrana fampianarana sy mamokatra
Q: manao namboarina ve ianao vokatra na vita ny ampahany?
A: faritra rehetra tsy ao amin'ny tahiry, na haba natao araka ny mpanjifa ny sary na ny santionany! Raha toa ka misy faritra mba ho, Aza misalasala mandefa ny tsara fanahy sary / santionany ho antsika.
Q: Moa ny sary ho azo antoka rehefa mahazo azy io ianao?
A: Eny, dia tsy hanafaka ny famolavolana ny antoko fahatelo raha tsy miaraka amin'ny fahazoan-dalana.
Q: Inona no atao hoe MOQ?
A: Matetika tsy nametraka MOQ, fa ny mihoatra, ny mora vidy kokoa. Ankoatra izany, dia faly isika hanao anjara na ny santionany nitranga fahiny ho an'ny mpanjifa mba ho azo antoka tsara fitsipika.
Q: Afaka manao nanarato teny mifototra amin'ny ny santionany?
A: Eny, afaka manao mifototra amin'ny fandrefesana ny santionany mba hanao sary ho an'ny fanaovana tooling.
Q: Inona ny fitaovana fanaraha-maso ny kalitao amin'ny trano?
A: Misy efa-spectrometer, tensile fitsapana sy UT Sonic milina araka ny fomba NDT manamarina ny hifehy ny fanariana hamantatra ambanin'ny eny amin'ny fanariana.
Previous: aluminium fikarakarana faty oem nanarato faritra
Aluminum Oil Pump-kevi-pitantanana
Die Alatsaho Aluminum Oil Pump
Casting maty Pump Fa Auto
Casting maty Water Pump
Aluminium maty fanariana blower flanges faritra
aluminium maty fanariana blower faritra